Maareynta xiriirada Android la xiriira tafatirka, qarinaya ama soo horjeeda, xanibeen, degida, dhoofinta ee xiriirada. Dhammaan noocyada kala duwan ee, kuwaas oo ka mid ah maamulka xiriirada ee Android lagu wada hadleen Read More >>
Ma doonaysaa in ay qabanqaabiyaan xiriirada Android ka PC? Waxaad isku dayi kartaa qalab this. Waxay kaa caawinaysaa in aad si fiican u abaabulo xiriiro. Read More >>
Jidka No si ha sort xiriirada Android by Magaca awoowe? Waa maxay sababta isku day in aadan Tababaraha this Android. Waxay kaa caawinaysaa in si fudud aad u samayn. Read More >>
Haddii aad qabtid wax dhibaato ah si ay u gudbiyaan xiriirada ka Nokia in telefoonada Android, waa inaad raacdaa tilmaan fudud oo 4-tallaabo ay ku socdaan iyada oo loo marayo hanaanka si fudud. Read More >>
Maqaalkani waxa aad Socon geeddi-socodka oo dhan, waayo, sida inuu ka soo kabsado xiriirada tirtiray ka qalabka Android iyo sida inuu ka soo kabsado xiriirada ka Android telefoonada screen jabay. Read More >>
Waxaan ka hadli doonaa laba hab oo ka Lumia wareejinta xiriirada si Android ee qodobkan, mid ka mid ah sida kor lagu soo sharxay. Read More >>
Dadka intooda badan rabaan in ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya telefoonada. Ma garanaysaa sida aad fariimaha si ay u gudbiyaan ka Samsung in Samsung? Halkan waxa ku jira laba siyaabaha si ay kuu caawiyaan. Read More >>
SMS diritaanka ka your computer waa mid xiiso leh gaar ahaan marka aad leedahay barnaamij hufan oo smart sida MobileGo Wondershare. Your waayo-aragnimo user noqdo ka xiiso badan yahay marka aad leedahay fursado sen Read More >>
Isku day inaad ka xanibeen tirada spammer ah, laakiin haddii ay dhacdo, halkaas oo tirada ka Qarsoonba, xanibeen qoraalka ku habboon yahay. Intaa waxaa dheer, waxaa jira tiro ka mid ah barnaamijyadooda loogu talagalay xanibeen text spam ah. Read More >>
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira hab sahlan ee ay u qabanayaan eegin isticmaalaya iPhone ama telefoonka android. Si fudud u gelin, oo keliya fariin u gudbinayaan si qofka loogu tala galay. Read More >>
Si kasta oo ay u soo kabtaan fariimaha tirtiray on Samsung Galaxy Ace? Haa, waxaa jira mid ka mid ah. Read maqaalka si aad u hesho xal u faahfaahsan inuu ka soo kabsado aad SMS hadda. Read More >>
Marka fariin isku mid ah ayaa si dhakhso ah loo baahin dad badan oo, soo diro fariimo group runtii waa habka ugu wanaagsan oo ugu hufan iyo qaababka badan telefoonada smart iyo aad u badan kooxda qoraalka Read More >>
Sidee si ay u gudbiyaan xogta ay ka Huawei in qalab Android? Boggan waxaa ku tusi doonaa talaabo hababka talaabo. Read More >>
Ma rabtaa inaad sii qulquli videos kombiyuutar si ay Android? Halkan, qodobkan wuxuu kuu sheegayaa sida ay u gudbiyaan oo aanay videos in aad si fudud u Android. Read More >>
Ma doonaysaa in lagu wareejiyo music kombiyuutar si ay Android? Halkan, maqaalkan aad bixisaa laba jid oo sahlan loo sameeyo. Read More >>
Sidee baad u gudbiyaan xiriirada, music, sawiro, video iyo sawiro ka Symbian in Android? Read full hagahan si Symbian wareejiyo Android. Read More >>
Isticmaalka MobileTrans si ay u gudbiyaan xogta waa si dhakhso ah oo ka kaaftoomi-free. Waxaad u baahan tahay oo kaliya shaqeysa cable USB, computer, aad ZTE telefoonka, iyo Android Phone cusub. Read More >>
Baro sida loo hagaagsan Muuqaalka in aad telefoon cusub Android, iyo xiriirada kala iibsiga ka Outlook ay si degdeg ah oo ku haboon Android. Read More >>
Maqaalkani waxa uu inta badan kuu sheegayaa sida ay u gudbiyaan xiriirada ka Android inay telefoonada Android xal sahlan. Akhri maqaalka iyo imtixaamo. Read More >>
Halkan waxa ku jira Top 15 Wareejinta Samsung. Waxaad u leeyihiin in ay ogaadaan haddii aad qabto smartphone Samsung ah! Read More >>